» सावधान ! कतै तपाईं पार्टनरको ‘एब्युसिव रिलेशनशिप’को शिकार हुनुभएको त छैन ?
सावधान ! कतै तपाईं पार्टनरको ‘एब्युसिव रिलेशनशिप’को शिकार हुनुभएको त छैन ?
९ पुष २०७६, बुधबार २३:१०
प्रेम, विवाह र सम्बन्ध एक अर्काका परिपूरक हुन् । विवाह भइसकेपछि समन्धमा प्रेम अत्यावश्यक कुरा हो । प्रेम वास्तवमा दुई हृदयको मिलन हो । आफ्नो जोडीको चित्त नदुखोस्, कुनै शारीरिक वा मानसिक समस्या नपरुन्, कष्ट नहोस्, आफ्नो जे भएपनि उनको राम्रो होस् भन्ने चाहाना हुन्छ । जब एक अर्काप्रति भरपूर प्रेम र आदर हुन्छ तब मानिस आफ्नो पार्टनरप्रति पूर्ण समर्पित हुन्छ ।